ciyaaraha: Jarmalka oo billaabay kubad aysan daawaneyn taageerayaal | Hangool News
ciyaaraha: Jarmalka oo billaabay kubad aysan daawaneyn taageerayaal
June 14, 2020 - Written by Hangool News 1
Bayern Munich oo hoggaanka u haysa horyaalka Bundesliga ee Jarmalka ayaa guul xarago leh ka gaartay kooxda Union Berlin kulan oo qayb ka ah kulamada aan horey loo arag loona maqal ee dib loogu bilaabay ciyaaraha dalkaasi xiligan lagu jiro aafada fayraska korona.
Horyaalka ayaa dib loo bilaabay iyadoon wax taageeerayaal ah garoonka ku sugneyn, sidoo kale badi dadkii ku sugnaa garoonka ay xirnaayeen gafuur-xir, isla markaana la joojiyey in loo dabaaldego goolasha marka la dhaliyo.
Robert Lewandowski ayaa Bayern Munich oo koobka daafacanaysa siiyey hoggaanka ciyaarta ka dib gool ku laad uu dhaliyey daqiiqadii 40-aad, goolkaasi oo ahaa kiisii 34-aad uu xilli ciyaareedkan u dhaliyo Bayern.
Benjamin Pavard ayaa goolka labaad ee guusha u xaqiijiyey Munich ka gadaal markii madaxa si xirfad iyo xeelad huwan uu ugu dhaliyey kubad gees ka laad aheyd oo uu soo laaday Joshua Kimmich.
Inkastoo Bayern Munich ay guul ka gaartay ciyaarta oo ay laba gool dhalisay haddana 3 mar oo kaliya ayay goosha Union Berlin toogatay.
Ciyaartoyda iyo tababarayaasha kooxaha Jarmalka ayaa toddobaadkan karantiil ugu jiri doona hoteellada, iyagoo maraya baaritaan fayraska korona oo joogto ah, waxayna uga tagi karaan goobaha ay ku tababartaan iyagoo wada socda.
Tababaraha Union Berlin Urs Fischer ayaa ciyaartii maanta aan kooxdiisa maamuleyn sababtoo ah wuxuu jabiyey nidaamka karantiilka markii uu geeriyoodey sodogiis.
Kulamada kale ee Axadii iyo Sabtidii dhacay waxaa ka mid ahaa FC Köln oo ku ciyaaraysay garoonkeeda The Rhein Energie Stadion taas oo 2-2 ay isla dhaafi waayeen Mainz.
England: ‘Ciyaaraha Premier League ee hakadka galay oo dib u billaabanaya’
Haweeney dilka eygeedii awgii uga cararaysa dalkeeda
Sabtidii Borussia Dortmund ayaa inta garoonkeeda Westfalen stadion geysatay kooxda FC Schalke, waxay beerka kaga xasharisay 4-0.
FC Augsburg iyo VfL Wolfsburg oo fooda isku daray gegida Augsburg Arena waxaa 2-1 ku adkaatay VfL Wolfsburg oo marti aheyd.
Fortuna Düsseldorf iyo SC Paderborn ayaa iyaguna ku kulmay garoonka Merkur Spiel-Arena ee Fortuna Düsseldorf waxayna ku kala hoyday 0-0.
Hertha Berlin ayaa inta ugu tagtey Hoffenheim gurigeeda Rhein-Neckar-Arena waxay ku soo dharbaaxday 3-0.
Eintracht Frankfurt oo ku ciyaaraysay hoygeeda Commerzbank-Arena waxaa 3-1 ugu xoog sheegatay Borussia Mönchengladbach
Xagga gooldhalinta horyaalka waxaa 26 gool ku horkacaya wiilka reer Poland Robert Lewandowski ee u ciyaara Bayrn Munich, waxaa soo baacsanaya Timo Warner oo RB Leipzig u safta lehna 21 gool, waxaa isaguna 14 gool leh Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ka tirsan.
Xagga kala horeynta shaxda waxaa hogaaminaysa Bayern Munich oo leh 58 dhibcood, waxaa labaad yuurarta Borussia Dortmund waxayna leedahay 54 dhibcood, Borussia Mönchengladbach ayaa saddexaad fadhida lehna 52 dhibcood, kaalinta afaraadna waxaa jiifta RB Leipzig oo 51 dhibcood leh.
Rashford oo sameeyey guddi caawinaya carruurta gaajeysan
Laacibka Adduunka ee Lionel Messi oo ku dhawaaqay hadal Barcelona wadnaha jaray
Soddon sano ka dib kooxda liverpool waa horyaalka koobka ingriiska
Copyright © 2020 Hangool News ®All rights reserved. Site Designed By SomSite Designs